Shirkad bixineysa fursad waxbarasho kuna siineysa mushaar labo kun dollar bil walba… – Hagaag.com
Shirkad bixineysa fursad waxbarasho kuna siineysa mushaar labo kun dollar bil walba…
Posted on 31 Maarso 2019 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Shirkada “Modern Labor” ayaa soo bandhigtay in ay bixineyso mushaar bil walba oo gaaraya 2000 dollar dadka doonaya in ay bartaan cilmiga Computerada ee ICT si ay waqti ugu helaan barashada barmajinta muddo shan bilood ah.
Manhajka tijaabada ee shirkadda oo lagu baranayo cilmiga Programming meel fog ayaa qof kasta looga baahan yahay inuu heli karo faraaqo 30 saacadood isbuucii ee tababarka muddo shan bilood ah, iyada oo shirkada bixin doonto mushaarka ka qeyb galaha oo gaaraya 2000$ bishiiba inta uu socdo tababarka.
Kadib markaad qalin jebisid oo hesho shaqo aan ka yarayn mushaarkeeda afartan kun oo doolar sannad kasta, tusaale ahaan, shirkadu waxay heli doontaa 15% mushaarka ka qaybgale kasta muddada labada sano ee soo socota.
Tusaale ahaan, haddii ka qeybgalaha uu helo shaqo mushaarkeeda uu yahay $ 80,000, wuxuu ku celin doonaa shirkadda $ 24,000 mudo laba sano ah.
Ma jiraan wax shuruud ah oo ku xiran ka qeybgalka mashruucan sidoo kale kuma xirna inaad aqoon u leedahay ICT ama Programming, shardiga keliya ee jira waa qofka codsadaha inuu xaq u leeyahay inuu ka shaqeeyn karo shirkadaha Mareykanka markuu dhameysto tababarka.
Habkan ganacsiga casriga ahi waa tusaale ka mid ah Heshiiska kala qeybsashada Dakhliga, oo ah nidaam u dhigma ganacsadayaasha Wall Street iyo Silicon Valley oo raadinaya dhiirigelinta noocaan oo kale oo waxbarasho.
Tan iyo markii la furay qabashada araajida waxaa la ogolaaday saddax qof ilaa hadda iyada oo shirkaddu isku dayeysa inay hesho siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu falanqeyn karo halista shaqada iyo dad qalin jebiya oo diyaar u ah suuqa shaqada ee Technolojiyada.